Please Save The Lives Of Serbian Players: Ciyaartooyo Noloshoodu halis ku jirto
HomeChampions LeaguePlease Save The Lives Of Serbian Players: Ciyaartooyo Noloshoodu halis ku jirto
Ciyaartooyo u dhashay wadanka Serbia ayaa halis ugu jira in kooxo budhcad ahi ay ku laayaan dalkaas gudihiisa.
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta ee Serbia, Mirko Poledica ayaa shaaciyey in ay ka cabsi qabaan in la layaabo qaar ka mid ah ciyaartooyada dalkaas, falkaas oo ay fulin doonaan sida ay tibaaxayaan xogo ay heleen mid ka mid ah kooxaha budhcadda ah ee ka qawlaysata.
Poledica waxa uu sheegay in koox taageereyaal ah oo gaangiister ahi ay ku xoogeysteen dalka gudihiisa isla markaana ay u cago-jugleeyeen qaar ka mid ah ciyaartooyada oo ay dil ugu hanjabeen. Falkii u dambeeyey waxa uu dhacay Isniintii oo ay budhcaddaasi heleen laacibka kooxda Novi Pazar ee Zarko Udovicic kaas oo markii uu khasaariyey rikoodhe loo dhigay kulan ay kooxdiisu la yeelatay FK Rad ay budhcaddu qabteen, isla markaana u sheegeen in uu naftiisa ka quusto, geerina isku diyaariyo. Ciyaartan ayaa ku dhamaatay 1-0 ay guuushu ku raacday FK Rad, iyadoo guul-darrona ay la yoyatay kooxda martida ahayd ee Novi Pazar ee uu ka tirsan yahay ciyaartoyga sugaya seefta budhcadda. Haddii uu Zarko Udovicic dhalin lahaa rikoodhahaas waxa ay ciyaartu ku dhamaan lahayd barbar dhac 1-1.
“Waxa aynu sugaynaa inta ay budhcaddu dilayaan mid ka mid ah ciyaartooyadeenna” sidaa waxa yidhi Poledica oo u warramay shabakadda xidhiidhka ciyaaraha adduunka ee FIFA.
“Sannadihii tegay, waxa aan maqlayay mashaakilaad dhacayay, layaab ayayse tahay marka ay istaagayaan. Waxa werwer igu haya xidhiidhka kubadda cagtu tallaabo ma qaadin, waanay ka aamusan yihiin arrintan.
“Waa in ay tallaabo qaadaan si loo damaanad qaado nolosha ciyaartooyada, haddii kale waxaynu arki doonaa ciyaartoy la dilay, waanaynu sugaynaa intaynu arkayno iyadoo budhcaddu dishay mid ka mid ah ciyaartooyadeenna” ayuu yidhi.
Poledica Waxa uu masuuliyiinta dalkiisa ku eedeeyey in aanay qaadin tallaabo lagu xakamaynayo gaangisterrada ku sii badanaya dalka.
“Serbia, waligeen kuma aynaan maqal taageere la xidhay ama loo qabtay fal-dambiyeed dhaqan xumo oo ka soo horjeeda kubadda cagta oo uu kula kacay ciyaartoy, waana sababta keentay cabsida ciyaartooyada. Maalin walba waxa ay filayaan in mid ka mid ahi albaabka lagu soo jebiyo oo la garaaco, ama gaadhigooda dab la qabadsiiyo ama in madaxa laga toogtoba” ayuu yidhi Poledica.
Liverpool 0-0 West Brom – All Goals & Highlight Extended (EPL)
Donnarumma Oo Ogolaaday Inuu Ku Negaado AC Milan